Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Hotels Ummandla oMbindi Kampala
IKampala (e-UK:, eUS.) Yeyona dolophu inkulu neUganda. Idolophu efanelekileyo yayiqikelelwa ukuba inabemi abayi-1,680,800 yabantu nge-31 kaJulayi ka-2019 kwaye yahlula-hlulwa ngokweendawo ezintlanu zaseKampala, iCandelo leKawempe, iCandelo laseMakindye, iCandelo laseNakawa, neRubaga. Umda wedolophu yaseKampala yindawo efanelekileyo yesixeko kunye ne-Wakiso District, Mukono District, Mpigi District, Buikwe District nase Luweero. Inabemi abakhula ngokukhawuleza okuqikelelwa ukuba bangama-6,709,900 2019 abantu ngonyaka ka-8,451.9 yiUganda Bureau of Statistics kwindawo eyi-2 km3,263.3 (2015 sq mi). Ngo-13.80221, le ndawo yedolophu enkulu yavelisa ingqikelelo ye-GDP eqikelelweyo ye- $ 2011 yezigidigidi (iidola zaseMelika ngo-4.03) ngokutsho kuka-Xuantong Wang et al., Owayengaphezulu kwesiqingatha se-GDP yase-Uganda ngaloo nyaka, ebonisa ukubaluleka kweKampala kuqoqosho lwase-Uganda. IKampala kubikwa ukuba iphakathi kwezona zixeko zikhula ngokukhawuleza e-Afrika, kunye nenqanaba lokukhula kwenani labemi le-XNUMX pesenti ngooSodolophu besiXeko. IKampala ibekwe kwelona dolophu lihle kakhulu ukuba lihlale eMpuma Afrika ngaphambi kweNairobi kunye neKigali nguMercer, iarhente yokucebisa ngophuhliso lwehlabathi esekwe kwisiXeko saseNew York.